လင်းသန့်| December 27, 2012 | Hits:12,525
“ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်” အနုပညာ ပြပွဲ ကျင်းပနိုင်ငံခြားသားများ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် စိစစ်ရေး ကော်မတီ ဖွဲ့မည်လူဦးရေ ၅၁ သန်းကျော်တွင် ပြည်ပရောက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ မပါသေး“ငြိမ်းချမ်းရေးရမှ၊ အိမ်ပြန်ရမှ လုပ်ငန်း လုပ်ပေးမယ် ဆိုရင် အချိန်ပိုကြာမယ်”အွန်လိုင်းဗီဇာ စနစ် လာမည့် စက်တင်ဘာတွင် စတင် ကျင့်သုံးမည်
bo bo December 27, 2012 - 10:32 pm မလေးရှား=၉၉.၉၉၉၉% ……ပြောလိုက်ရင် လယ်သိမ်းခံရတယ် …စစ်သားတွေမဒိန်းကျင့်တာခံရတယ်….နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ရှိတဲ့သူတွေ ရိုဟင်ဂျာဆိုပြီးညာနေကြတယ်…..
Reply Nan swe mon December 28, 2012 - 5:18 pm Have to arrest in japan too.Lulain khit ma shi tot buu or ma shi say chin tot buu byar.Luu yote mar twae.pe yin nainngan yay ma kaung kyaung pyaw tal.
Reply မင်းကြီးညို December 30, 2012 - 12:33 am ပြည်တွင်းက လူတွေလည်းဆန္ဒပြနေမယ့်အစား အစိုးရစစ်တပ်က လယ်တွေမတရားသိမ်းပါ